सिँउदोमा सिन्दुर लगाउनु हुन्छ, गम्भीर असर पुग्ला ! – Jagaran Nepal
सिँउदोमा सिन्दुर लगाउनु हुन्छ, गम्भीर असर पुग्ला !
विवाहीत महिलाले सिन्दुरको प्रयोग गर्ने गर्छन् । सामान्यता हिन्दूधर्मावलम्बि महिलाले विवाह पश्चात सिन्दुरको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर, त्यस्ता सिन्दुर स्वास्थ्यका हिसावले भने हानिकारक पाइएका छन्। एक अध्ययन अनुसार सिन्दुरमा लिड अर्था सिसाको अधिक प्रयोग हुने गरेको छ । लिड मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ ।